Xusuusnow is daryeelid adiga oo caawinaya kuwa kale - Amjambo Africa
Daraasad cilmi-nafsiyeed oo Mareykan ah ayaa lagu ogaadaa in xitaa marka uusan cudurka sii xumaan, 72% dadka Mareykanku ay dareemaan culeys xagga lacagta ah ugu yaraan mararka qaarkood. Soogalootiga, lacag u dirista kuwa ay jecel yihiin waa culeys dhaqaale oo dheeri ah oo dadka kale aysan la kulmin. Si looga caawiyo bulshada inay maraan caqabadaha culeyska dhaqaale, Prosperity ME waxay bixisaa talooyinka iyo ilahaan.
Xusuusnow in qiimaha shaqsiyeed aysan go’aamin duruufaha dhaqaale. Sababtoo ah dad aad u tiro badan ayaa ku faanaa awooddooda inay naftooda iyo qoys askoodaba wax u taraan, shucuurta sida xanaaqa, dambiga ama ceebta markay awoodi waayaan inay sidaas sameeyaan waa wax caadi ah. Dadka qaar ayaa dareemi kara in xaaladooda dhaqaale ay ka tarjumeyso qofka ay yihiin. Aragtidaasi waxay ka dhigi kartaa wax ka qabashada caqabadaha waaweyn ee maaliyadeed xitaa adag. Caqabadaha dhaqaale waa dhibaato dibadeed oo wax laga qaban karo, talaabo talaabo ah.
Ku barbaar fayo qabka shucuurta adigoo ku xiraya bulshada. waqtiga tayada leh ee dadka kale kaa caawin karaa dejiyaan walwalka shucuureed in inta badan tagaa dhibaato dhaqaale. Saaxiibda, qoyska, la-taliye, koox taageero ah, ama bulsho diimeed dhammaantood way ku caawin karaan. Mararka qaar la wadaago cunto, ciyaar ciyaar, ama ka shaqeynta arrimaha dadka kale waxay ku dari kartaa dareen macno leh nolol maalmeedka.
Ku celceli maskaxda iyo fekerka si aad u maareyso walaaca daqiiqad-daqiiqada ah. Jidhku wuxuu uga falceliyaa culeyska shucuureed si la mid ah sida culeyska jirka. Adrenaline waxay sare u qaadaa heerka garaaca wadnaha waxayna keentaa dhidid iyo xiisad muruq ah. Markii ay kugu adkaadaan dareenka xanaaqa, argagaxa, ama ceebta, iskuday inaad si qoto dheer u neefsato caloosha oo aad tiriso shan ka hor inta aadan si tartiib ah u sii deyn neefta. Ku celi tan illaa astaamaha culeyska jirka ay istaagaan. Tani waxay caawin kartaa inta lagu jiro xilliyada adag.
La hadal la-taliye maaliyadeed oo aqoon leh lana abuuro qorshe caafimaad qab dhaqaale. Muhaajiriinta Muhiimka ahi waa kuwo waxtar leh, madax banaan, oo ku xidhan bulshada, awoodna u leh waxqabadka aan caadiga ahayn.Si kastaba ha noqotee, qaar badan ayaa wali dareemaya raaxo la’aan iyagoo weydiisanaya caawimaad dhaqaale. Laakiin caawimaad ayaa loo heli karaa si loo abuuro khariidada loo maro iyo in lagu barto qalab mustaqbal maaliyadeed oo amaan ah. Qaar badan oo ka mid ah xubnaha Barwaaqada ‘ME’ waa soo galooti Mainers. Ballantu waa bilaash dhammaan sheekooyinka dhammaantoodna waa kuwo sir ah.
PreviousAmaan noqo markaad lacag u dirayso
NextMiyaan bilaabaa samafal si aan ugu caawiyo dadka guryahooda ku nool?